Muva nje, ngenxa yokwanda kwamacala aqinisekisiwe e-Covid-19 e-Southeast Asia efana neVietnam, imboni yezokukhiqiza ingabuyela eChina ngokwengxenye. Ezinye izinto zikhonjiswa kwezohwebo, kanye nokuthi ukukhiqizwa kubuyile. Ucwaningo lwakamuva olwenziwe nguMnyango Wezohwebo lukhombisa ukuthi cishe ama-40% ezinkampani ezisanda kusayinwa zezinkampani zakwamanye amazwe zikhuphuke unyaka nonyaka. Ukubuyiswa kwama-oda aphesheya kwezilwandle kuletha amathuba angakaze abonwe amabhizinisi amancane naphakathi nendawo, kanti futhi kuletha nezinselelo.
Ngokwenhlolovo ezisanda kwenziwa emakethe yezindwangu eGuangdong, Jiangsu naseZhejiang, kanti ezinye izinkampani zezohwebo zakwamanye amazwe, ukunitha, izindwangu, okokugqoka namanye amatheminali zithole ama-oda ngokushelela kusukela ngoJulayi, futhi zikwazile ukuqala ngaphezulu kuka-80% noma ukukhiqizwa okuphelele.
Izinkampani eziningi zibike ukuthi kusukela ngoJulayi nango-Agasti, ama-oda atholwe emazweni athuthukile njengaseYurophu, eMelika, eCanada nakwamanye amazwe athuthukile ikakhulukazi ngoKhisimusi nePhasika (ikakhulukazi ama-oda okubuyisa avela eningizimu-mpumalanga ye-Asia asobala kakhulu). Babekwe ezinyangeni ezingama-2-3 ngaphambi kweminyaka edlule. Ibanga eliphansi, inzuzo embi, kepha ukuhleleka kwesikhathi eside nesikhathi sokulethwa, ukuhweba kwamanye amazwe, amabhizinisi endwangu nezingubo anesikhathi esanele sokuthenga izinto zokusetshenziswa, ukufakazela ubufakazi, ukukhiqiza kanye nokulethwa. Kepha akuwona wonke ama-oda angathengwa ngokushelela.
Izinto zokusetshenziswa ziyakhuphuka, ama-oda aba "amazambane ashisayo"
Ngenxa yomthelela walolu bhubhane, ama-oda amaningi kudingeke ukuthi ahlehliswe. Ukuze benze ukuthengiselana okubushelelezi, bekufanele balamule namakhasimende, benethemba lokuthi bazoqonda. Kodwa-ke, kusamele babhekane nokukhungathwa amakhasimende, futhi abanye akukho abangakwenza ngaphandle kokwamukela amakhasimende ukuthi akhansele ama-oda ngoba awakwazi ukuletha izimpahla…
Isizini yeGolden Nine neSilver Ten iyeza maduze, izinkampani bezicabanga ukuthi kuzoba nama-oda amaningi avela kumakhasimende. Yize abebebhekene nakho ngukuthi lo mbukiso ukhanseliwe noma uhlehlisiwe, kanti namanye amazwe nawo avimbe amazwe abo ngenxa yalolu bhubhane. Amasiko ezwe lapho amakhasimende atholakala khona aseqalile nokulawula ngokuqinile imikhiqizo ehlukahlukene engenisiwe neyethunyelwa kwamanye amazwe. Ukungenisa nokuthekelisa sekuyinkinga kakhulu. Lokhu kuholele ekwehleni okukhulu ekuthengweni kwamakhasimende.
Ngokuya ngempendulo evela kwamanye amakhasimende angaphandle: ngenxa yalolu bhubhane, umkhiqizo wawo wonke amazwe ushayeke kakhulu, imikhiqizo yawo eminingi isidayiswe yaphela, futhi uhlu olugciniwe kugcinwa luphansi kakhulu, futhi kunesidingo esiphuthumayo ukuthenga. Isimo esikhona njengamanje samazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia akufanele sithathwe kancane. Ama-oda aphesheya kwezilwandle ayaqhubeka ukubuya, futhi ezinye izinkampani zaseChina seziyekile “uku-oda ukushoda ukuze ziqhume ama-oda.” Kepha ebusweni bokwanda kwama-oda, abantu bezindwangu abajabule! Ngenxa yokwanda kwama-oda, intengo yezinto zokusetshenziswa nayo iyakhuphuka.
Futhi ikhasimende alisona isilima. Uma intengo inyuswa ngokungazelelwe, ikhasimende linethuba elihle lokwehlisa ukuthenga noma ukukhansela ama-oda. Ukuze baphile, kufanele bathathe ama-oda ngentengo yangempela. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlinzekwa kwezinto zokusetshenziswa kukhuphukile, futhi ngenxa yokwenyuka okungazelelwe kwesidingo samakhasimende, kube nokushoda kwezinto zokusetshenziswa, okuholele kwabanye abahlinzeki abangahle bakwazi ukunikeza izingxenye efektri ngesikhathi. Lokhu kuholele ngqo ekutheni ezinye izinto zendwangu ezisetshenzisiwe bezingekho endaweni futhi bezingalethwa ngesikhathi ngesikhathi ifektri ikhiqiza.
Ukuqinisa ukukhiqizwa kokuthunyelwa, amafektri nezinkampani zacabanga ukuthi kungenzeka ukuthunyelwa ngokushelela, kepha bebengalindelanga ukuthi othutha impahla angasho ukuthi kunzima kakhulu uku-oda iziqukathi manje. Kusukela ekuqaleni kokuhlelwa kokuthunyelwa, akukho ukuthunyelwa okube yimpumelelo ngemuva kwenyanga. Ukuthunyelwa kuqinile, futhi intengo yezimpahla zasolwandle ikhuphukile, futhi eziningana ziphindwe kabili izikhathi eziningi, ngoba ukuthuthwa kolwandle okuphezulu nakho kumile… Izimpahla eziqediwe zingasala kuphela endlini yokulinda ukuze zilinde, nesikhathi sokubuyiselwa kwemali nayo inwetshiwe.